mairie-antananarivo – FAMPATSIAHIVANA
administrateur 24 janoary 2018 Commentaires fermés
Ampatsiahivina ny bouffe-mobiles sy mpivarotra anaty fiara rehetra fa arakin’ny lalàna misy eto amin’ny Tanànan’Antananarivo, dia mila manao fangatahana alalana na fanavaozana ny fahazoan-dalana izy ireo. Ny fe-potoana farany fanaterana ny antontan-taratasy fangatahana dia ny Alarobia 31 Janoary 2018 ao amin’ny Guichet Unique DUD – Varavarana 36 – Lapan’ny Tanàna – Analakely. Marihina fa izay manana fahazoan-dalana ihany no mahazo manao ny asany sy mandoa vola ary mahazo quittance. Hisy ny fepetra ho raisina ho an’ireo izay tsy manana fahazoan-dalana.
Ampatsiahivina ny régisseurs publicitaires sy ny orinasa manana takelaby/labasy/hosodoko dokam-barotra rehetra, fa arakin’ny lalàna misy eto amin’ny Tanànan’Antananarivo, dia mila manao fampilazana atao dika 02 miampy ny quittance nandoavana ny hetra tamin’ny 2017, ary misy ireto antsipirihany ireto :
lisitran’ny dokam-barotrany rehetra, ny karazany, ny refiny, ny toerana misy azy.
Ny fe-potoana farany fanaterana ny antontan-taratasy filazana dia ny Alarobia 31 January 2018 ao amin’ny Service de Développement des Affaires Economiques – 1er étage – varavarana ankavia – Stade Municipal Mahamasina.